Fikrada Guban: Zaylici, ma madaxweyne ku-xigeenka JSL baa mise waa caaqil reer?Your Everyday News
Fikrada Guban: Zaylici, ma madaxweyne ku-xigeenka JSL baa mise waa caaqil reer?
August 17, 2019 Booddaale News News, Opinions 0
Lewis Center, Ohio—Somaliland waxay jirsatay 28 sano; ilaa iyo haddana ma jiraan nidaam ama hab keexaya xuduudada gobolada, degmooyinka iyo magaalooyinka wadanka.Taasna waxay dhalisay gobolada galbeedka inuu weli Ka jiro is qab-qabsi iyo foodo baahsan.Foodadaas waxay u suurtogelisay in madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, Zaylici, abaabulo dhulballaadhsi qabiil ku salaysan deegaano ka tirsan gobolada Gabiley-Guban iyo Salal.
Maalintii ugu dambaysay Silaanyo xafiiska madaxtooyada ee xukunka wareejin rabay, 2017, wuxuu Zaylici ka saxeexay in Cali Xaydh oo ka tirsan Gabiley in la raaciyo gobolka Awdal. Cid ka dooday ama ka dhiidhiday arrintaasina ma jirin. Waa dhul ballaadhsi habaysan (systematic) oo ay wadaan siyaasiinta fashilmay, aqoonyahan ku sheega gudo iyo dibadba iyo oday dhaqameedka Borama. Dibaddaana laga soo abaabulo.
Awdal waa gobol ku salaysan kala qaybinta beelaha walaalaha iyo xididka ah ee reer Somaliland “Balkanization of Somaliland” lagana dhaxlay faqashtii Siad Barre/ Dafle/Muse Rabiile. Siad Barre sababtoo wareegto ugu sameeyey , 1987, Awdal waxa inuu isagoo ku xumaynayay beeshii markaa u cadowsanayay.
Waxa la yaab leh sida xariiqa xad goboleedka beenta loogu sameeyey gobolka Awdal. Iyadoo Guban oo dhan iyo Lug-Haya oo ka tirsanaan jirtay degmada Gabiley la raaciyey Awdal.Doorashadii ugu dambaysay ee xorta ahayd ee Somalia ka dhacday,1969, waxaa Gabiley-Lughaya “constituency” laga soo doortay Cali Warsame Bookh.
Maalintii Siyaad Barre xuduud beenaadkaa sameeyey cid reer Gabiley- Guban ah oo hadli kartay ma jirin. Waxa lagu sameeyey qori caaradii. Waxase la yaab leh in 28ka sano ee xorriyada la haysto aan la arag qof xaqdarradaa ka hadlaya; walaa madax-dhaqameed, walaa siyaasiin, walaa aqoon yahanno.
Wakhtigii wadanka la xoreeyeyna 1991, siyaasiinta Gabiley-Guban ama Somaliland inay saxaan khaladaadkii Afweyne iska daa yee—-waxay ugu sii dareen reer Borama, dhul hor leh, kuraas barlamaan oo aysan xaq u lahayn, laaluush, iyo mashraariic, si loogu sasabo inay mowqifka Somaliland ay racaan.Cigaal, ina Janbeer, Axmed Qootaale,Ismail Faqash,Abeeb Tima-Cadde, iyo Madxaweyne Biixi, waa kuwii dhulkii Gabiley -Guban siiyey reer Borama si nabad khiyaali ah loo helo ama cododkooda madaxweyne ama jago wasiir lagu noqdo!!
Waxaa kaloo madaxdii Wasaarada Arrimaha Gudaha ka dhammaan waayeen xuduuda u dhaxaysa Gabiley iyo Hargeisa, ee Abaarso iyo Arabsiyo. Intay soo celin lahaayeen dhulkii faqashtu xooga ay uga qaaday Gabiley-Guban.
Ila iyo hada wax nabad dhab oo ka jirtaa galbeedka ma jirto.Jirina mayso inta Zaylici iyo beeshiisa ay boobayaan dhulka Gabiley-Guban iyo Salal.
Sidee bay ku dhacady in gobolada Gabiley-Guban iyo Hargeisa oo ay degan yihiin 1.5 million ay u waayaan marin xeebta Gacanka Cadmeed, oo ay weligood lahaan jireen?
Gobolka Gabiley-Guban noqon maayo oo keliya: Gabiley, Tog-Wajaale, Alleybaday, Arabsiyo, iyo Agabar.Gobolku waa inuu marin u leeyahay xeebta Gacanka cadmeed, degmada Lug-Haya waa in laga maamulaa gobolka.
Somaliland waxay leedahay xeeb gaaraysa 875 km, oo nagu filan, waa haddii wanaag la doonayo. Gobollada badankood waa iany marin u helaan Gacanka Cadmeed, si ay dadkooda uga faaidaystaan kheeraadka Bada.Ma dhacayso in koox yar ama beelo yar ay xuurto ku haysataan xeebaha. Waa hanti dadka oo Somaliland oo idil wada leeyihiin.
Laakiin, xeebahaas siiba Lug-Haya iyo Saylac waxay noqdeen goobo “contra-band” iyo hub laga soo galiyo,lagana dhoofiya duur joogta ku socoto gacanka carbeed, ayna ka soo galaan argagixiso iyo cadawga Somaliland. Maamuladii Riyaale, Silanyo iyo Biixiba indhaha ayey Ka qarsadeen in wax laga qabto foodada ka taagan xeebaha galbeedka Somaliland, si codka reer Boorama loo helo wakhtiga doorashada.
Dhulballaadhsiga uu wado Zaylic; Biixi ayaa ka sheegay shirkii Kulmiye ee Borama. Laakiin, Biixi wuu ku jees jeesay “mocked” Yabaal, oo ahaa oday reer Salal oo Ka cabanayey dhulballaadhsiga beelaysan uu maareenayo Zaylici. Yabaal reerkiisa gacan bay siiyeen Somaliland markii wadanka la xoreenayey.
Zaylici markuu u Borama uga ololaynayay qabsoomiddii shirka Kulmiye ee Boorama wuxuu sheegay markuu la hadlayay tolkii in heshiiska dhisadda dekedda Berbera ee Imaaraadka ay ka mid tahay dekedda Lughaya, aan idiin ballan qaadayo,” inay 10 sano gudahood noqoto deked caalamiya oo Awdal iyo Itoobiya u adeegta”. Qorshahan reeraysan ee Awdal lagu wado inay noqoto dawlad-goboleed ka maaranta dhaqaale ahaan Somaliland waxa ka mid ah waddada la bilaabay ee Boorama iyo Djibouti.
Maalin dhawaydna wasiirka Ganacsiga, Maxamuud Sacad Zaajin mar uu Borama kula hadlayey beeshiisa, ayaa sheegay in Zaylici iyo isaga ay wadaan barnaamij horumarinta reer Borama. Zaajin waxa uu Yidhi, marka ay dhamaato wadada isku xidha Djibouti-Borama, in “Borama noqon doonto xarun ay ku kulmi doonaan dadka Djibouti, Xamar, iyo Hargeisa.” Zaajin intuu uu hadlayey marnaba afkiisa ka maysan soo bixin Somaliland.
Laakiin waxaan kaloo aan leeyahy Zaylici iyo Zaajin, Borama marka hore waa inay noqotaa goob kulmisa dadka walaalaha, xididka, ee jaarka ah — ee ku nool: Gabiley-Guban, Salal iyo Awdal. Dadkaas oo ay isku direen kala dileen siyaasiin fashilmay, aqoonyahano ku sheeg, iyo odayaal uu hoogaaminayo Zaylici. Wanaaga iyo kal gacaylka aad u hayso Xamar iyo Djibouti u hay deriskaaga—dadka Gabiley-Guban iyo Salal. Nabad waarto iyo horumar dhab sidaas baa lagu gaaraaa.
Aniga Lug-haya waxa ku aasan awowgay— dhulkana wareegto uu saxiixay Gen. Dafle ama codka reer Borama ku noqon mayso gobolka Awdal. Beenta uu wado Zaylici socon mayso.
Ilaa iyo haddana ma jirto baarlamaan ama maxkamad dastuuri oo ansixiyey xuduudadan laysku haysto.
Iskala qob-qob dooni mayno, dhuka Somaliland oo idil baa wada leh. Si Somaliland hore ugu socoto, waa in dib loogi noqdaa goboladan sida sharci darada lagu sameeyey oo dadka walaalaha iska hor keenaya.Waa in dhulballaadhsiga Zaylici uu wado la xakameeyo; intaysan dadweynaha Gabiley-Guban ay xuduudada beenta ah ay gacmahaooda ku sixin.
Foojig la’aanta Siyaasiyiinta Soomaalilaan iyo Fajida Kuwa Soomaaliya.
Deg Deg Ciidanka Poliska Oo Soo Bandhigay qabashada Gacankudhiigle Hargeysa Dil Ka Gaystay.